IBeijing Bureau iHlola ukuSebenza kweMeyile yaMazwe ngaMazwe kunye nokuThintela uBhubhane kunye noLawulo
Kutshanje, uSekela Mlawuli we-Beijing Post Administration ukhokele iqela eliya kwiZiko lokuPhathwa kweMeyile yomoya ukuze baphande ngokusebenza kwe-imeyile yokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle, kugxilwe ekuhlolweni kwe-disinfection kunye nokuthintela ubhubhane ...
Ngomhla wamashumi amabini ananye, bekukho izinto ezingaphezulu kwama-180,000 ezongeziweyo kwihlabathi, olona suku lukhulu ukusukela oko kwaqhambukayo. Ngexesha le-22 lendawo, intloko yeprojekti yezempilo kaxakeka ye-WHO uMichael Ryan wathi ukusasazeka kwenyumoniya entsha yenkunkuma kumazwe amaninzi anabantu abaninzi ...
Ngubani olumkisa 'ngencopho yesibini'
Amazwe apho usulelo lwe-coronavirus luyehla lusenokujongana "nencopho yesibini yesibini kwangoko" ukuba banokuyeka ngokukhawuleza kumanyathelo okunqanda ukuqhambuka, uMbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO) ulumkisile ngoMvulo. UGqr Michael J. Ryan, uMlawuli oyiNtloko weSigqeba sezeMpilo kwi-WHO ...
Amatyala aseRussia aQinisekisiweyo eCoronavirus aMatyala angama-200,000
Inani labantu eliqinisekisiweyo ukuba ne-coronavirus eRussia lidlulile kwi-200,000, idatha eposwe kwiwebhusayithi esemthethweni esekwe ngabaphathi bezempilo iboniswe ngeCawa. Inani elipheleleyo lamatyala lenyuke laya kwi-209,688 emva kokuba olunye uvavanyo lwe-11,012 lubuyile lukhona ...
Ukujonga ngokwenyani kuvavanyo lomzimba omncinci: Sibaleka njani ukuya phambili ngokuCinga?
Ukuvavanywa kunokuba yinto ephambili ekuVulekeni kwakhona, kodwa ezinye i-Overpromise kunye ne-Underdeliver. Njengamagosa aseburhulumenteni ase-US aqala ukuphikisana ngamanyathelo afanelekileyo ekunciphiseni izithintelo ngenxa yenoveli ye-coronavirus, kuvavanyo lwe-antibody njengesitshixo sokubuyela esiqhelweni. Le ethile ...
I-Thermometer ye-infrared ayifumaneki
Kufunyenwe kumaqonga amakhulu e-commerce nangona ixabiso le-Infrared Thermometer ikwi-yuan eyi-100-200 kuphela, iphelile. Ukuthenga kufuna ukuya kwinkqubo "yentlawulo yedipozithi yentlawulo yentlawulo yokugqibela-yokuhanjiswa". Ukuthunyelwa ngaphambi kuka-A ...
Ngaba uyafuna ikhontrakthi yoGqirha wosapho?
Kumaxesha akutshanje, umkhuhlane uqhubekile ukwanda. UNks uWang, owayeneenyanga ezintlanu ekhulelwe, wayenokhohlokhohlo kunye nempumlo egobileyo, ecinga ukuba "ubethiwe." Kuba bexhalabile ngabantwana esiswini, abanakulinga ukuthatha amayeza; boyika ukosuleleka ...
Inkampani yethu inikele ngezixhobo kwiiyunithi ezahlukeneyo
Emva kwemini ngoFebruwari 25, u-Hebei Evidence-based Medical Technology Co, Ltd. wanikela ngomnyango wokulinganisa iqondo lobushushu, ikholamu yokulinganisa ubushushu, iimaski ezili-1 kunye neeseti ezili-10 zempahla yokuzahlula kwiShijiazhuang iRadiyo nakwisikhululo sikamabonwakude ukulwa esi sifo. ..
Ukujonga ukuNceda, ukunceda abantu base-Itali-Hebei abaSebenzayo
Imixholo yesiTshayina · Hebei: Ii-coronaviruses ezintsha ziyagqugqisa, kwaye ubhubhane uyasasazeka kwilizwe jikelele. Ukusukela nge-23: 00 nge-23 ka-Matshi 23, iimeko ezingama-59,138 zizonke zafunyaniswa e-Italiya kunye nokusweleka kwabantu abangama-5,476, nto leyo eyenza ukuba ilizwe libe nolona qhambuko lubi phesheya kolwandle. Th ...